Etu esi emepụta ọmarịcha anya maka akụkọ Instagram | Martech Zone
Instagram nwere ihe karịrị 500 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, nke pụtara ma ọ dịkarịa ala ọkara nke isi njikwa ọrụ nke echiche Instagram ma ọ bụ mepụta akụkọ kwa ụbọchị. Akụkọ Instagram bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma ị nwere ike isi jikọọ na ndị na - ege gị ntị n'ihi atụmatụ ya dị egwu nke na - agbanwe agbanwe. Dabere na ọnụ ọgụgụ, pasent 68 nke puku afọ na-ekwu na ha na-ele Akụkọ Akụkọ Instagram.
Site na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị ọrụ na-eso ndị enyi, ndị ama ama, na azụmahịa, anyị nwere ike iche na ọtụtụ ndị ọrụ na-eri ọtụtụ azụmaahịa na ihe ọ bụla ọzọ nke ikpo okwu na-enye. Iji jikọọ ma dọta ndị na-ege gị ntị, ịkwesịrị mepụta Akụkọ Akụkọ Instagram nke na-apụta ìhè. Ndị a bụ ndụmọdụ atụmatụ asatọ nwere ike inyere gị aka ịmepụta ihe ndị ọzọ na-akpali akpali, ndị anya na-akpali akpali, na itinye aka na Akụkọ Instagram.
Jiri eserese eserese
Dabere na ọnụ ọgụgụ, ihe ntanetị vidio na-enwetakarị 38 pasent karịa itinye aka na ihe oyiyi. Yabụ, ọ bụrụ n 'ị dọtaghị ndị na-ege gị ntị na sekọnd anọ mbụ nke ikiri, ị nwere ike ịkwụsị mmasị ha kpamkpam. Na-agbakwunye animation na foto gị bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji tinye mmegharị ma mee ka ndị na-ekiri gị tinye aka.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ọdịnaya vidiyo, ịnwere ike ịgbakwunye animation na onyonyo gị ma ọ bụ mepụta mmemme dị iche. Instagram gụnyere ụfọdụ inbuilt ngwaọrụ ị nwere ike iji, dị ka akparaghị ókè GIF gallery ma ọ bụ animated lyrics. Ọzọkwa, ị nwekwara ike iji onye ọzọ Ngwaọrụ Instagram maka nsonaazụ kacha mma na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Mepụta akwụkwọ akụkọ
Nwere ike iji Akụkọ Instagram n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Site na ịkesa atụmatụ ọhụrụ iji kwalite mgbasa ozi ọhụụ gị, akụkọ ndị a na-enye gị ụzọ dị egwu iji soro ahịa gị na-enweghị nhicha dịka ndepụta gị. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịdebe eserese, foto eserese, na vidiyo vidiyo na-enweghị nchegbu ma ọ ga-emeju ọdịnaya ndị ọzọ ị nwere. Na agbanyeghị, a bịa n'ihe eserese nke Akụkọ Akụkọ Instagram gị, ịkwesịrị ịgba mbọ hụ na ị na -emepụta atụmatụ mara mma nke na-adọta ndị na-ekiri gị ka ha gee ntị. Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nweta nke ahụ bụ site na iji storyboard iji kọwaa akụkọ gị tupu ịmalite na imewe.
Akwụkwọ akụkọ na-enyere gị aka ịhazi ọdịnaya kwesịrị ekwesị iji biputere ma hazie ọdịnaya ahụ n'ụzọ ịchọrọ ka egosiputa ya. Nke ahụ na - enyere aka n’ịhụ na akụkọ akụkọ Instagram gị na - aga nke ọma ma mee ka ndị na - ekiri gị tinye aka. Akwụkwọ akụkọ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ị na-etinyekarị ederede na akụkọ gị n'ihi na ọ na-eme ka akụkọ gị sie ike.
Akụkọ nke Instagram gị agaghị enwe naanị ụdịrị eserese. Nwere ike gbanwee ha ma tinye foto oge ụfọdụ. Ihe kachasị mma banyere akụkọ Instagram bụ na ihe ọ bụla ị bipụtara ekwesighi ka eji aka gị kee ma ọ bụ dị elu. Kama, ịnwere ike iji igwefoto nke ekwentị gị weghara ụfọdụ foto dị n'azụ-ebe a na ngwa ahụ. Ọzọkwa, e nwere ọtụtụ nde nhọrọ ịse foto n'efu maka iji kwa. Naanị ị ga - ahọrọ foto nke dabara na ọdịnaya ị na - ekekọrịta ma dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ akara gị.
Jiri Akara Akara Gị Na Akara Aka
Mgbe ị na-erere ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa gị, ịkwesịrị idobe ihe niile ị mepụtara na akara, gụnyere akụkọ Instagram gị. Ya mere, i kwesịrị inwe a zuru ezu ika kit njikere mgbe niile iji akara gị, akara edemede, na koodu hex gị, tinyere ihe ndị ọzọ. Gụnyere akara gị na akara edemede gị na-enyere aka nke ukwuu site na njirimara akara, ọkachasị mgbe ndị na-ege gị ntị na-agagharị na akụkọ. Rapara na palette na-acha otu agba na akụkọ Instagram gị niile dị mkpa iji na-eto eto ncheta ika. Na agbanyeghị ma ị na - ewulite aha onwe gị, ma ọ bụ nwee azụmaahịa, idebe usoro agba gị na - agbanwe agbanwe bụ isi. Jiri paleti agba ahụ n'ụzọ amamihe na ọrụ iji mee ka ngosipụta nke akụkọ akụkọ Instagram gị dịkwuo mma. Ozugbo ndị na-ekiri gị hụrụ ihe eserese gị, ha nwere ike mara na ọ bụ nke nzukọ gị na-enweghị ahụghị aha njirimara gị.
Tinye Onyunyo Text
Ikwesiri imepụta ihe eji eme ihe ngwa ngwa nke Instagram nyere iji mepụta ọhụụ na-adọrọ mmasị maka akụkọ Instagram gị niile. You nwere ike itinye onyinyo ederede na ntaneti akụkọ site na itinye ọkwa abụọ nke agba dị iche na otu ederede. Nwere ike nweta nke ahụ site na ịpị ederede gị na ndò gbara ọchịchịrị ma ọ bụ na-acha ọkụ ọkụ ma tinyezie ya na ndò ahụ site na iji ntakịrị akụkụ. Ndụmọdụ a bụ ụzọ na-enye obi ụtọ iji tinye ederede n'elu vidiyo ma ọ bụ foto ị jidere na ngwa ahụ, na-eme ka ọ dị mfe na ngwa ngwa ịmepụta akụkọ Instagram tupu ibipụta ya.
Mepụta overlays na ndabere
Ngwa ihe osise nke ngwa ngwa Instagram nyere nwere ike ịme karịa ịkọwapụta na ịcha agba ederede na akụkọ gị. Ngwaọrụ a pụrụ iche nwekwara ike inyere gị aka n'ịmepụta mkpuchi agba na ndabere nke na-eme ka ọdịdị nke akụkọ gị dịkwuo mma. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịkekọrịta ụfọdụ ọkwa dị mkpa na akụkọ Instagram gị na-enweghị ịchọta foto iji mee ihe, ịnwere ike imeghe ngwa ọrụ pen, chọta agba agba ịchọrọ wee pịa ma jide ya ruo mgbe ihuenyo niile gbanwere agba ahụ.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịmepụta a-egbukepụ egbukepụ machie machibido site tinye n'ọrụ pụta ìhè ngwá ọrụ maka otu usoro. I nwekwara ike ịmepụta ụfọdụ sneak peeks site na itinye a ndabere agba n'elu nke ihe oyiyi gị na-akpụ akpụ ihe nchicha n'elu iji wepụ ụfọdụ nke na agba na welie ihe oyiyi gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ nzụlite ọkachamara na mkpuchi na ị nwere ike ịkpọ ndị na-ewu weebụsaịtị nwere ike ime ya maka gị. Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ha Ebe a, ma ọ bụrụ na ahụ erughị gị ala ime ya n'onwe gị.
Jiri gifs na akwụkwọ mmado
Akụkọ nke Instagram na-enye gị akwụkwọ mmado dị iche iche na nhọrọ GIF iji weta echiche na ụdị ọchị maka atụmatụ gị. Nwere ike ịchọ ihe akọwapụtara ma ọ bụ pịgharịa site na nhọrọ dị iche iche iji gbakwunye na akụkọ Instagram gị. Onwere ụdị akara ngosi dị iche iche, ị nwekwara ike ịgụnye akwụkwọ mmado hashtag, Q & As, nyocha, na ntuli aka iji welie ọdịdị nke ihe ngosi gị ma mee ka ndị na-ege gị ntị tinye aka. I nwekwara ike ịmepụta ma nyefee GIF na akwụkwọ mmado gị maka ndị na-ekiri iji tinye na akụkọ ha ma ọ bụ nye ohere dị mfe maka akara gị.
Mepụta akụkọ okike na nke na-adọrọ mmasị na Instagram bụ akụkụ dị mkpa nke azụmahịa gị ma ọ bụ akara aka gị. Ma ị bụ onye na-ese foto, onye na-ese foto, onye na-ese foto, ma ọ bụ obere ọchụnta ego azụmaahịa, ịmepụta akụkọ akụkọ Instagram mara mma ma pụta ìhè nwere ike inyere gị aka ịgbasa ozi na ikike impe gị enweghị ike igosi ọrụ gị na nnukwu ndị na-ege ntị. Ndụmọdụ ndị a tụlere n’elu nwere ike inyere gị aka ịmepụta eserese dị elu nke ga-adọrọ ndị na-ekiri gị na akụkọ Instagram gị niile.
Tags: animation gifanimation gifsgifsNdụmọdụ azụmaahịa instagraminstagram akụkọinstagram akụkọ ndabereNkọwa akụkọ instagraminstagram akụkọ ederedeInstagram akụkọ overlaysinstagram akụkọ fotoAkwụkwọ mmado akwụkwọ akụkọ instagramOnyunyo ederede instagramakụkọ akụkọ instagramakpa akwukwoanya